दैनिक ७ सय भन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना – Koshidaily
दैनिक ७ सय भन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना
access_alarms Koshi daily २८ भाद्र २०७७, आईतवार ०३:१३	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौँ ।कोरोनाका कारण समस्यामा परेका, रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरु वा कोरोनाकै कारण खाना खान नपाएकाहरुलाई विभिन्न मनकारी व्यक्ति र संघ संस्थाले अहिले निः शुल्क खाना खुवाइरहेका छन् । चार महिना लामो लकडाउन, त्यसपछिको निषेधाज्ञाको यो समयमा सयौ व्यक्तिहरुका लागि खाना बनाएर त्यो पनि सधै एउटै समयमा खुवाउनु चानचुने कुरा होइन । अनि उनीहरुले बनाउने खाना कसरी बन्छ ? कहाँ बन्छ ? त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्छन होला ?त्यस्तै खाना बनेको ठाउँबाट कसरी प्याकिङ भएर आउँछ ? आज हामी यिनै जिज्ञाशा मेटाउदै छौ ।
हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखेका दृश्यका भित्री कथा आज पस्कँदैछौ ।विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीले नेपाललाई पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । हजारौं संक्रमित भएका छन् । तीन सय बढीले ज्यान गुमाएका छन । यो सख्या दिनहु बढिरहेको छ । अहिलेसम्म लाखौले रोजगारी गुमाएका छन । कोरोनाका कारण रोजगारीमा मात्रै होइन हजारौले दुई छाक खाना खान समेत पाएका छैनन् । गत चैतबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी भएको लक डाउनले धेरैजना हप्ता दशदिन भन्दा बढी समय भोकै बस्न बाध्य भए ।
अवस्था तत्काल सामान्य नहुने अवस्था आएपछि मनकारी व्यक्ति र संघसंस्थाहरुले कोरोनाका कारण खाना नपाएकाहरुलाई खोजी खोजी सहयोग गर्न थाले । कोही, हप्ता दश दिन एक महिनामा थाके त कोही आजको दिनसम्म पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई खोजी खोजी खाना खुवाइरहेका छन् । तिनै मध्येकी एक हुन इन्दिरा रानामगर । उनी बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक हुन् । कोरोना महामारी अघि जेलका आश्रित बालबालिलाई हेर्दै गरेको उनको संस्थाले अहिले कोरोनाका कारण समस्या परेका खान नपाएका अशक्त व्यक्ति र सडक बालबालिकाहरुलाई खाना खुवाइरहेको छ ।
पहिलो दिन आफ्नो संस्थामा रहेका बाहेक २० जनालाई खाना खुवाएकी रानामगरले दोस्रो दिन ३०, तेस्रो दिन ४० हुँदै एक महिना नपुग्दै दैनिक २ सय जनालाई खाना खुवाउन थालिन् । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा गरी एक दिनमा ७ सय बढीलाई खाना खुवाइरहेको उनको भनाई छ । सुरुमा ठमेलको संचयकोष क्षेत्रमा खाना खुवाइरहेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र केही स्थानीयहरुले कोरोनाको बेला भिडभाड र फोहोर ग¥यो भन्ने बाहनामा आफुमाथि दुव्र्यहार गरेको उनको तितो अनुभव छ । संस्थाका सबै स्टाफहरु नभएको बेला दरबारमार्ग बृत्तका प्रहरीहरुले समेत खाना बाँड्न सहयोग गरेको उनको भनाई छ ।
सुरुमा दुई छोरी र आमा मिलेर दैनिक खाना बनाउने, प्याकिङ गर्ने, खुवाउने र साँझ आएर भाँडा धुने काम गर्ने गरेकोमा अहिले भने अन्य स्टाफहरु पनि आइसकेपछि केही सहज भएको उनको भनाई छ । संक्रमणको जोखिम नहोस भनेर सधै आफै खाना डेलिभरी गरी असाहयहरुलाई बाड्छिन् रानामगर ।आफुले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर खाना वितरण गर्ने गरेको उनको भनाई छ । सुरुको दिनमा आफ्नै खर्चबाट पकाएर खुवाउने गरेको भएपनि अहिले विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरुले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।कसैले जन्मदिनको अवसरमा त कसैले कुनै न कुनै अवशर पारेर नगद तथा अन्य सहयोग गर्दै आएका छन् ।
विहानै देखि खाना तयारीका लागि ड्युटीमा खटिनुपर्ने भएपनि सहयोगीहरुलाई काममा आउनै पर्ने जवरजस्ती भने नगरेको उनको भनाई छ । तर काममा आए÷नआएपनि सुरक्षित बस्न आफ्नो स्टाफहरुलाई सधै भन्ने गरेको उनले बताइन् । लकडाउन अघिसम्म बढीमा २ सयजनाका लागि खाना बनाएको अनुभव सुनाउने रानामगर अहिले अहिले ७ सय भन्दा बढी व्यक्तिका लागि खाना तयार गर्छिन । त्यो पनि करिब पौने १ घण्टामा । दैनिक औषतमा ३ बोरा चामल पकाउने गरेकोमा कहिलेकाँही बढी मान्छे भएमा पहिलो चरणमा खाना बाँडेर पुनः पकाउँदै बाँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
खाना तयार गर्दा देखि प्याकिङ गरी वितरण गर्दासम्म १ सय बराबर तीन जनालाई खाना खुवाछिन रानामगर ।महामारीको समयमा अरुलाई दोष दिएर बस्नुभन्दा सबै मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव इन्दिराको छ । उनी भन्छिन्, जनताले नै जनताको समस्या समाधान गर्ने हो । नेपाली मनका धनी छन्, यो महामारीको समयमा त्यो छर्लङ्ग देखिएको छ । सरकारका कामजोरीहरु औल्याउँदै सुझाव दिने र मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अहिले ठमेल, गल्कोपाखा चोक, जमल, खुलामञ्च लगायतका ठाउँमा ७ सय भन्दा बढीलाई दैनिक खाना खुवाउँदै आएकी छन् ।
भागरथी हत्या प्रकरण : दिनेशमाथि अनुसन्धानका लागि अझै ५ दिन म्याद थप
मोबाइल र गरहरना लुट्न वृद्धाको हत्या, चितवन आएको केही दिनमै एसपीले सार्वजनिक गरे अभियुक्त